Microsoft yaziwa njengenye omunye konke okusemandleni inkampani isofthiwe ikhasimende ngamakhasimende. It usethule njalo izinhlelo ongaletha akhululeke lula kubasebenzisi bayo. Ukuze uhlale uxhumene nomhlaba, ukwenza imiyalezo futhi ngiqhuba isiqophi noma umsindo izingcingo, Microsoft aklame uhlelo lwayo lokusebenza okukhulu esemthethweni laziwe kabanzi njengoba Skype kubasebenzisi bayo Android.
Skype thwebula Android
thwebula Skype apk
Ngokusho kocwaningo, Ngaphezu kwe 250 abasebenzisi million usebenzisa i-Skype njengoba ithuluzi zokuxhumana yabo. Futhi inombolo yabasebenzisi liyakhula usuku ngalunye oludlulayo ngenxa ukusebenza yayo esebenza kahle. Lolu hlelo lokusebenza yi-Microsoft ikuvumela kuchunywa nanoma yimiphi abasebenzisi usebenzisa i-Skype. Kodwa kudingeka wazi ukuthi okuhle internet uxhumano noma idatha yeselula ukungena emhlabeni kokusebenzisana ka-Skype.
amafoni akho Android lungakwenza ukuthi ukukhuluma ubani ofuna kodwa ngosizo Skype, unga isiqophi ekuhlanganyeleni nabanye abasebenzisi. Lolu hlelo lokusebenza ekhethekile kuyinto kwalokho sokushintsha kubasebenzisi Android. Uma ufuna umhlahlandlela ephelele Skype kubasebenzisi Android, inqubo yayo nokusetshenziswa, izici zawo ezimangalisayo kanye onqenqemeni ukuncintisana bese uhlala kokufunda lesi sihloko eziwusizo.
Ungakwazi kwamandla uthole le Skype lokusebenza esiphawulekayo kumadivayisi akho Android ngokulandela izinyathelo ezilula
Hamba ukudlala esitolo kumadivayisi yakho Android search i-Skype noma Thwebula kusukela isixhumanisi inikezwe LAPHA.
Chofoza phezu inkinobho Faka I-ukulandwa futhi ukufakwa Skype.
Uma uhlelo lakho lokusebenza, manje uchofoze bese bhalisiwe kuhlelo lokusebenza
Kudingeka ukuthi ufake igama lakho akhawunti ye-imeyli futhi iphasiwedi.
Ungasebenzisa akhawunti ekhona kodwa uma ungenayo ke wenze entsha.
Khetha yakho Igama Skype, elisetshenziswa njengesibonakaliso yakho Skype-ID ukuqala ukushaya.
1 Skype Ngemvume Interface:
1.1 Engeza oxhumana nabo & Yenza Call
1.2 Izici Skype:
1.3 High-Quality Isiqophi & Izingcingo lomsindo:
1.4 Sokwabelana ku-Skype
2.0.1 Edge ukuncintisana Skype:
3 Skype kuwo wonke amadivayisi:
3.0.1 Skype kokubili izingcingo inthanethi kanye okungaxhunyiwe
3.1 Call On landlines & Hambayo Ucingo Izinombolo Nge-Skype:
3.2 Okuningi kusuka kusayithi lami
Skype Ngemvume Interface:
Engeza oxhumana nabo & Yenza Call
Ukuze ukwengeza oxhumana nabo ku-Skype, uzobona iphaneli libonisa ukuthi zonke lezi abasebenzisi abasebenzisa i-Skype futhi exhumene akhawunti yakho e-mail. Enye indlela iwukuba ungakwazi umyalezo noma nge-email noma ubani usebenzisa i-Skype kanye ungakwazi ukwengeza ID abo Skype ukuqala ukushaya nomunye.
Ungakwazi ukwengeza singalokothi sithintane ngokukhetha Engeza abantu ku kwimenyu main Skype. Ungengeza futhi abasebenzisi kudingwa nje ngokubhala yayo lomsebenzisi le-Skype bese ngokuchofoza ungeze koxhumana nabo. Ngaphezu kwalokhu, ungase futhi wenze uhlu lwakho lokuxhumana esetshenziswa kakhulu ngokuwangeza ku Engeza yakho izici eyintandokazi. Ungakwazi futhi ukuvimba noma ususe lokuxhumana yakho izinkinga zobumfihlo nokuphepha.
Skype ngu Microsoft liseva amakhasimende ayo ngesisusa ehlukile uthi ngithi Hi kuwo wonke umuntu emhlabeni jikelele.
Umbono waleli iwukuba wehlise ibanga futhi kwenze kube ukucindezeleka-mahhala abantu siyohlala sixhumene. Lokhu kuzuzisa kakhulu ukuba uhlale uxhumekile nomndeni wakho izinhlangano zakho uma ungeke ukwazi ngokwenyama uxhumane nabo.
Skype has a uhlu omkhulu amakhasimende wanelisekile. Nsuku zonke, izigidi zabantu zisebenzisa Skype ukuxoxa noma ushayele abanye abantu. Skype ukunikela izici zayo kuhlanganise.
High-Quality Isiqophi & Izingcingo lomsindo:
Skype beveza ukunika konke okusemandleni kwekhwalithi ephezulu yevidiyo namakholi umsindo imiphumela amakhasimende ayo. Ungathola crystal isiqophi ecacile futhi umsindo ubiza emhlabeni wonke.
Ingxenye best, Skype unika imiphumela yayo elikhulu izinga kokubili izingcingo omunye komunye noma amakholi iqembu. Kufanele siqiniseke ukuthi usebenzisa ezinhle lwe-inthanethi olukahle ukuze bagweme noma ikuphi ukuphazamiseka kuvidiyo yakho noma amakholi alalelwayo.
Lesi isici ewusizo kakhulu olunikezwa Skype. Ngosizo Ukwabelana, ungakwazi ukuba sizikhandle ukwaba izethulo zakho, izithombe, imibhalo noma yini ngesikhathi socingo.
Lena kakhulu inenzuzo emhlabeni yenkampani. Abasebenzi ungaba amafayela zabo ezibalulekile noma imibhalo, umbukiso isethulo, imininingwane yephrojekthi, ukuziphatha ukuhlaziywa, izidingo iklayenti futhi ungakwazi ukuxazulula izinkinga phakathi izingcingo zabo.
Uma ufuna ukufihla ingxoxo yakho noma kudinga nanoma yikuphi ukuphepha noma siqu izizathu, ke ungakwenza lokhu kalula nge-Skype. Lolu hlelo lokusebenza kwenza ube nengxoxo ngasese ekupheleni kuze kube sekupheleni ukubethela inqubo.
Qopha izingcingo zakho:
Skype futhi ikuvumela ukuba alobe isiqophi noma umsindo izingcingo zakho. Lokhu kuyasiza uma ufuna ukuqopha noma yimuphi umlayezo eziyigugu noma isikhashana. Iphinde izinsiza in yokufunda nekucaphela phansi amaphuzu ezingaphendulwanga ngesikhathi sezingcingo zakho.
Lesi sici futhi usebenzela emhlabeni yenkampani, uma ufuna ukulalela umfundisi noma kumqashi iziqondiso zakho futhi, ungakwenza kalula ngokubuka ukuqopha izingcingo zakho.
Edge ukuncintisana Skype:
Skype ubelokhu ekhonza amakhasimende ayo isikhathi esingaphezu 10 iminyaka. Microsoft ngubani giant kule emakethe ukuncintisana uye akhiwe ngale ucingo lwe-video elikhonza izici eziningi lapho ezinye izimbangi like ubuso isikhathi, -Google duo, njll. kungukuthi ekuletheni. Lena yokuthi lolu hlelo lokusebenza ingenye zokusebenza ezisetshenziswa kakhulu emhlabeni wonke. I ovelele sici yokuncintisana kuhlanganisa
Skype kuwo wonke amadivayisi:
Ngokuyinhloko, Skype yakhelwe umsebenzisi android kuhlanganise bamaselula e-Android, amaphilisi Android, kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ze-Android. Kodwa ezithakazelisayo ingxenye Skype angasetshenziswa kuwo wonke amanye imikhiqizo njengoba kuhlanganise kahle-Microsoft Windows, Linux, Macintosh, Blackberry, futhi zonke amaphilisi Apple kanye Smartphones. Uma uneminye idivayisi wena nje kufanele ukulanda Skype futhi ungakwazi ukujabulela omunye kakhulu kwevidiyo wefoni zokusebenza.
Skype kokubili izingcingo inthanethi kanye okungaxhunyiwe
Esinye isici ukuncintisana le app oyinhloko Skype awukwazi kuphela izingcingo abantu abaku-intanethi kodwa Ungafonela ukuze uxhumeke nabantu abangenalo uxhumano lwe-inthanethi. Skype sisikisela lokhu premium izipesheli kubasebenzisi bayo ukuba musa ukubiza izinombolo zeselula izinombolo yolayini.
Ukuze ejwayelekile izingcingo inthanethi, ungenawo akhokhe lutho. Okudingayo kwakho ku-inthanethi ukuze wenze ikholi. Kodwa ngokubiza izinombolo zocingo noma izinombolo yolayini, Skype uyala ukubhalisa ukonga kakhulu kubasebenzisi bayo. Okunye izinzuzo evelele yezikhali Skype kubasebenzisi kwakhona
Usungenza amakholi nomndeni wakho, osebenza nabo noma abangane kuphi emhlabeni wonke. Skype ukunikela Ukushayela kwezindlela uhlelo kakhulu engabizi emazweni ehlukene emhlabeni wonke.
Ngaphezu abasebenzisi Android, lezi zici ziyasetshenziswa wonke amadivayisi kuhlanganise bekhompuyutha, iPhone, Xbox, OSX futhi abaningi
Skype ivumela amakhasimende ayo izindlela eziningi ukukhokhela okubhaliselwe kufaka Visa, Master ikhadi, Jcb, PayPal, nokudayisa, Ukuthengwa Apple In-App, express American, Western Union futhi abaningi
Le nqubo kulula kakhulu. Wena nje ukukhokhela okubhaliselwe, bese ulanda uhlelo lokusebenza Skype bese uqale ukushaya ngezisusa isiqophi sefoni isofthiwe.
Call On landlines & Hambayo Ucingo Izinombolo Nge-Skype:
Ukuze wenze i-Skype-to-yolayini izingcingo ku-Skype usebenzisa Android efonini yakho uzodinga Skype credit.
Chofoza kusixhumanisi esikweletu se-Skype ukwengeza Skype ikhredithi ku-akhawunti yakho.
Uma ungenayo i-Skype esikweletu ozama ukwenza Skype-to-yolayini ucingo, I-Skype izokuthumela i-pop-up yokwengeza i-akhawunti yakho.
Ibhayisikobho yezimanga uthole nyangazonke Skype okubhaliselwe noma ungakwazi phezulu up usebenzisa eyodwa-off izinkokhelo.
Setha ukubhalisa nyangazonke, uma Skype asetshenziselwa amakholi kwakho kwansuku zonke ngamazwe. Uzodinga ikhadi lasebhange lenqubo yokubhalisa.
Khetha inani lesikweletu se-Skype ongathanda ukulengeza futhi uchofoze 'Qhubeka'.
Chofoza amabhokisi engenalutho bese uqala ngokugcwalisa imininingwane lwakho lokukhokha kubhaliswe ku ikhadi lakho lasebhange.
Thenga yakho yekhredithi usukulungele ukusebenzisa i-Skype.
Manje ngathenga credit Skype ungaqala ukushaya izinombolo ngocingo lwasendlini noma omakhalekhukhwini.
Ukuqala, chofoza kusithonjana sefoni njengoba kukhonjisiwe ngezansi esithombeni.
Shayela inombolo ofuna ukukhuluma ngokungeza ikhodi ala mazwe athintekile futhi Chofoza Call Inkinobho.
Vala ifoni uma usuqedile ne ucingo lwakho.
Ukwengeza inombolo yolayini Chofoza 'Engeza inombolo' bese ufaka inombolo ye-landline ofisa ukuyengeza ohlwini lwakho.
Ungathenga eyakho inombolo ye-Skype ngemali encane okuyinto ewusizo kunoma ngubani ukukushayela ucingo lokuthi ngubani okungekho ku-Skype manje.
Enethemba ozifakile lokusebenza Skype ngempumelelo. Uma ubhekene nanoma iyiphi inkathazo, udedele udaba lwakho ebhokisini amazwana. Imibuzo yakho ziyoxazululwa ngokushesha ngangokunokwenzeka. Landela zonke izinyathelo ukugcina ukubekezela, uzokwazi ukusebenzisa iSkype kalula.
I-Novel Factory Ye-PC Windows 10/8/8.1/7 - Landa inguqulo yakamuva
I-Dxwnd Ye-PC Windows 10/8/8.1/7 - Landa inguqulo yakamuva
I-Eye Candy Ye-PC Windows 10/8/7 - Thwebula Khulula Inguqulo Yamuva
Rkill For PC Windows 10/8/7 - Thwebula Khulula Inguqulo Yamuva
Izigaba Download FaceTime
isikhathi sobuso ku-pc
Landa i-Facetime yeWindi
ibhokisi lomhlaba pc